Ngathi-i-Eurborn Co, Ltd.
I-Eurborn kuphela komenzi waseTshayina ozinikele kuphando, uphuhliso kunye nemveliso yentsimbi engaphandle engaphantsi komhlaba kunye nokukhanya kwamanzi. Ngokungafaniyo nabanye abathengisi abenza iintlobo ezininzi zezibane, kufuneka sihlale sigxile kwindawo enzima ecela umngeni kwimveliso yethu. Imveliso yethu kufuneka ikwazi ukuthatha le miqathango kwaye isebenze ngokugqibeleleyo ngaphandle komceli mngeni. Ke kufuneka senze yonke imizamo kwinqanaba ngalinye ukuze siqiniseke ukuba imveliso yethu iya kuyenza ukoneliseka.
Sifanele singqongqo kwiinkcukacha. Abo sikhuphisana nabo ziimpawu ezaziwayo kwilizwe liphela. Ke kufuneka simatanise owona mgangatho uphezulu kwiimveliso zethu kunye nemigangatho yawo. Nangona kunjalo, asihambelani namaxabiso abo. Oku kukuzibophelela kwethu kubathengi bethu, imveliso enexabiso eliphezulu.
1: Iqela lethu le-R & D lineminyaka engaphezu kwama-20 yamava okukhanyisa ngaphandle. Ukuphendula kwiimfuno zabaxumi bethu, ngokukhawuleza nangokufanelekileyo sigqiba i-ODM, uyilo lwe-OEM, kwaye sibonelela ngenkxaso yobuchwephesha bokulinganisa ukulindela.
2: Sinezinto zethu zangaphakathi zokubumba. Ayifani nabanye ababoneleli abakhuphela ngaphandle okanye umntu wesithathu.
3: Akukho MOQ uninzi zonke iimveliso steel stainless.
4: Sinikezela ngokuthe ngqo kumaxabiso ex-mveliso.
5: Sihambisana ngokupheleleyo nemigangatho yokuhlola esemgangathweni yamazwe kunye nokuhlolwa koxanduva kwezentlalo.
I-6: Senza uvavanyo lwe-100% kunye novavanyo lokuguga, i-IP (engenawo manzi, ingabi nalo uthuli) kunye nezixhobo.
7: Sineziqinisekiso zamalungelo awodwa omenzi wechiza.
8. Siyi-CE, i-ROHS, i-ISO9001 iqinisekisiwe.